Accueil > Gazetin'ny nosy > Pety Rakotoniaina: “Fanjakana tontakely no misy eto Madagasikara”
Pety Rakotoniaina: “Fanjakana tontakely no misy eto Madagasikara”
Tonga eto Antananarivo indray ingahy Pety Rakotoniaina izay filohan’ny antoko Tambatra. Araka amin’ny maha mpanao pôlitika azy dia nolazainy taminay fa noho ny raharaham-pirenena no nahatongavany eto izao. Tsy maintsy niala avy any Ikalamavony sy Fianarantsoa izy satria mandalo kihon-dalana i Madagasikara. “Zava-doza no hitranga raha toa ka tsy hisy vahaolana ho entina hijery izao zava-misy eto amin’ny firenena izao”, hoy ihany izy.
“Tsy azo jerem-potsiny izao zava-mitranga izao”, hoy ihany i Pety Rakotoniaina tsy misalasala manambara ny heviny. Fanjakana tontakely no nisy teto Madagasikara nanomboka ny taona 2001 izay nitondran’ingahy Ravalomanana Marc ity firenena ity. Mbola notohizan’ingahy Andry Nirina Rajoelina koa izany tamin’ny faha Fanjakana Tetezamita, ary izao mbola hamasinin’ingahy Hery Rajaonarimampianina izao. Izy telo lahy ireo no lazain’ingahy Pety Rakotonirina filohan’ny antoko Tambatra fa nanimba ny soatoavina Malagasy amin’ny fanaovana pôlitika teto Madagasikara. Tsy nahalala raha tsy ny resaka vola izy telolahy ireo hoy izy, ary ireo no azo lazaina fa fanjakana nangalatra indrindra teto Madagasikara hatramin’ny fahazoana ny fahaleovan-tenam-pirenena tamin’ny taona 1960. Tamin’ny andron’i Tsiranana Philibert sy Didier Ratsiraka ary Zafy Albert, dia pôlitika nifototra tamin’ny foto-kevitra sy ny hevitra no nitondrana an’i Madagasikara. Mpanao pôlitika nanana toe-tsaina hiaro firenena sy tombotsoam-pirenena no tena nanjaka tamin’izany. Nijery ny tombotsoa iombonana sy ny firenena ary ny taranaka izy ireny ary ny kolotsaina maha Malagasy ny Malagasy.
Nanomboka tamin’ny andron’ingahy Ravalomanana Marc ka hatramin’izao dia fanodinkodinana ny harem-pirenena no nataon’izy telo lahy ireo. Fivarotana ny andramena na ny “bois de rose”, fanodinkodinana volam-panjakana, fanaovana trafika ny harem-pirenena toa ny vatosoa sy ny harena ankibon’ny tany maro samy hafa, ary fanaovana kolikoly avo lenta teto amin’ny firenena.
Tsy nisy zavatra vitan’izy telo lahy ireo hoy ihany ingahy Pety Rakotoniaina raha tsy nampanan-karena azy ireo tao anatin’ny fotoana fohy. Toa izany koa ireo minisitra miaraka nitondra taminy. Tamin’ny andro teo alohan’ny fitondran’izy telo lahy ireo nefa dia tsy nahitana izany mpikambana ao amin’ny governemanta manana miliara any amin’ny banky izany. “Amin’izao fotoana izao dia manana trano sy harena ary vola any ivelan’i Madagasikara avy izy telo lahy ireo”, hoy hatrany i Pety Rakotoniaina.
“Izany no santionany amin’ny maha-fanjakana tontakely misy amin’izao fotoana izao sy niainana nanomboka tamin’ny taona 2001 izay nitondran’ingahy Ravalomanana Marc”, hoy izy.
Mila manova fomba isika ary manova fihetsika koa, ka tokony ho foanana ny fizaram-bola amin’ny fampielezan-kevitra sy ny fizarana akanjo sy zavatra hafa koa. Tokony haharitra iray taona koa ny fanaovana fampielezan-kevitra ary tokony tena hevitra no ho entina amin’izany fa tsy vola.
Mahakasika ny fanovana ny lalàmpanorenana indray dia nambarany fa tokony hovaina io ary tsy iandrasana ny filoham-pirenena hoavy eo. Nahoana hoy ingahy Pety no manabado vahoaka sy mamitaka indray ny mpanao politika maika hahazo toerana ireo, ka hilaza ny sasany fa izay filoha lany eo no hanova ny lalàmpanorenana io. Tsy hisy hanao izany hoy hatrany izy fa resaka fandrebirebena fotsiny ihany izany, satria azo atao ny fanovana sy ny fifidianan filoha ao anatin’ny iray taona.
Namaranany ny fanambarany omaly talata faha 14 novambra 2017 teo amin’ny Motel de Tanà tery Anosy raha nihaona tamin’ny mpanao gazety tonga niresaka taminy izy fa na inona na inona zava-mitranga dia tsy hiova amin’ireo fombany ireo izy telo lahy ireo fa hampanjaka ny vola sy fanjakana tontakely hatrany.